စျေးပေါအားလုံး Matters တွင်သင်တန်း!
Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
Udemy ပြင်သစ်၏တင်ဆက်မှု: အွန်လိုင်းသင်တန်းများတကယ်စျေးပေါ
ဒါဟာသက်ဆိုင်ရာထင်မြင်ချက်တောင်မှပိုဆိုး, Udemy ပြင်သစ်အပေါ်အမှန်တကယ်စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေထွက်ရှင်းလင်းရန်မှမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်။ အဲဒီအကြောင်းတစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် querying ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အဘို့ကိုကွညျ့ပါ! သငျသညျဖြစ်ကောင်းအင်္ဂလိပ်စာဖတ်သူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်စာဖြင့်ရေးသားအားလုံးနီးပါးဆောင်းပါးများကို၏သေးငယ်တဲ့သီပေါ်ကျလိမ့်မည်။
သငျသညျအပြည့်အဝဘာသာစကားနှစ်မျိုးမဟုတ်ပါလျှင်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး ... သူတို့ထဲကအဘယ်သူမျှမသင်အစစ်အမှန်အလားအလာ Udemy တစ်ခုတိကျမှန်ကန်စိတ်ကူး, ထိုအရပ်ကိုတွေ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ၏အလုံးစုံအရည်အသွေးအရကူညီပေးနိုင်သည်။
Udemy သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှကြီးထွားလာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးမှုသည်၎င်းသည်အမျိုးသား၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီး“ ပြင်သစ် Made in France” ခေါင်းဆောင် OpenClassRoom ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး၎င်းသည်ကျောင်းသားများကို၎င်း၏ရာထူးများသို့ဆွဲဆောင်။ မရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်သင်ယူလိုစိတ်ရှိသည်။
သို့သော်လျှင်ပင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအလွန်, သွေးဆောင်အဲဒီမှာကွယ်လွန်သွားသူမြား၏ထင်မြင်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်မေးမွနျးခွငျးမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်နိုင်အသံ, မယင်း၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုသေချာစေသည်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို၏ဤဗြောင်ကျကျနဲ့စိတ်ပျက်စရာမရှိခြင်းကုစားဖို့ကြိုးစားမှ, ဒီမှာ Udemy တစ်ဦးပြည့်စုံတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Udemy တစ်ပလက်ဖောင်းသင်ခန်း (ကြီးမားတဲ့ပွင့်လင်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများ) အမေရိကန်သည်။ အတ္တလန္တိတ်၏အခြားဘက်ခြမ်းမှမမိတ်ဆက်စကား။ ဆိုက်တွင်, စိတျကူးတိုင်းဘာသာရပ်အပေါ်သင်တန်းများ၏တစ်ဖွဲ့လုံးကွပ်မျက်သာတိုင်းတစ်ဆယ်သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ဆယ်ယူရိုနှင့်အတူရှိနေပါသည်။
ဖတ်ရန် Video2Brain နှင့်အတူအလွယ်တကူသည်သူ၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
E-သင်ယူမှုအတွက်စူပါမားကတ်နီးပါး "လျှော့စျေး" သင်တန်းများကို
အဆိုပါဘက်ဇ်များအတွက်အကြောင်းပြချက် Udemy အမေရိကန်နှင့်ဆက်ဆက်ကသူ့ Titanic catalog ပြုတော်မူပြီ။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်တွင် Udemy ပြင်သစ်ဂုဏ်ယူစွာကောင်တာများတွင်နီးပါး 55 000 လေ့ကျင့်ရေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်တွေနဲ့သူတို့အားဤကိန်းဂဏန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါနီးပါးနက္ခတ္တဗေဒတစ်ဦးကစံချိန်။ ငါးဆယ်တစ်ပြိုင်နက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကျော်လွန်ဖို့ရုန်းကန် - (အားလုံးစေရန်သင်တန်းအွန်လိုင်းပွင့်လင်းပွငျသစျထဲတွင်သင်ခန်း) ယေဘုယျခုနှစ်, float ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းကို Udemy တွင်တင်ခြင်းဖြင့်မည်သို့စတင်မည်နည်း။
အမှန်စင်စစ် Udemy ပေါ်တွင်မည်သူမဆိုတစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကဆရာ, ဆရာမအဘယ်သူ၏သင်ခန်းပင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လစာဖြည့်စွက်ထွက်ရောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ ဒါဟာ Udemy နေ့တိုင်း၎င်း၏ catalog ကိုချဲ့ထွင်ခွင့်ပြုကြောင်းလူတိုင်းရှိသိပ္ပံအတတ်တော်အားမျှဝေနိုငျသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
qu'Udemy ပြင်သစ်သူတို့အရည်အသွေးနိမ့်နှင့်အတူပေးအပ်ဖြစ်ကြောင်း, ပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သင်ခန်းပူဇော်လိုသောသူအပေါငျးတို့ကကြိုဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပွငျကအတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းအခဲ unearth ဖို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ဤ gargantuan ရွေးချယ်မှု၏အားသာချက်က Udemy အပေါ်လုံးဝအရာအားလုံးကိုသင်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် အဆိုပါ, G Suite သင်တန်းကျောင်း
ပုံဆွဲရန်၊ သင့်ခွေးကိုမည်သို့လေ့ကျင့်ရန်လေ့ကျင့်ရန်သို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရန်သင်ကြားရန်သင်ခန်းစာများရှိသည်။ ဒီအဆုံးမဲ့နီးပါးကျိုးကြောင်းမညီညွတ်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပဲ Udemy ကိုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ခွဲခြားထားတာပါ။ ဗဟုသုတအသစ်များရချင်ပါသလား။ မည်သည့်areaရိယာကိုမဆိုသင်လိုချင်သည်ကိုဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
အင်ျဂလိနှင့်ပြင်သစ် Udemy Udemy အကြားခြားနားချက်များ
အကယ်၍ သင်ကထိုးကျပြီးပြင်သစ် Udemy ဗားရှင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်ရရှိနိုင်သည့်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ၏ ၇၀% ကျော်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာဖြစ်ကြောင်းလျှင်မြန်စွာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမဖြစ်ပါနှင့်။ အားလုံးပုံမှန်ပါပဲ MOOC များသည်ယူအက်စ်မှလာသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်!
သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုဖြည့်စွက်သည့်အခါ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာအမှားတစ်ခု၏ရလဒ်မဟုတ်သကဲ့သို့သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အမှားလည်းမဟုတ်ပါ။ သင် Udemy သည်ကမ္ဘာကြီးကိုအောင်နိုင်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ရမည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနားလည်ထားသောဘာသာစကားဖြင့်သင်တန်းများကမ်းလှမ်းခြင်းထက်ဤကိစ္စတွင်မည်သည့်အရာက ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
အဆိုပါအနား6ဘက်ရှိပုံ၏သိမျးပိုကျဖို့ Sinson Olivier, Udemy ပြင်သစ်၏ပိုင်ရှင်
အင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးတစ်လုံးကိုစာဝှက်ဖေါ်လို့မရဘူးလား။ Udemy France မှလူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Olivier Sinson သည်အကြောင်းအရာကိုအလေးအနက်ထားသည်။ သူသည်ရေရှည်တွင်ပြင်သစ်၌တတ်နိုင်သမျှသင်တန်းများပေးလိုကြောင်းကိုလည်းမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ထိုနေရာတွင်မရပ်နိုင်ပါ။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိန်းဂဏန်းသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကြွယ်ဝလာမည်မှာသေချာသည်။
ဖတ်ရန် Elephorm တွင်တစ်ဦးက Activity ကိုအဆိုပါဗီဒီယိုသင်တန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Make
2017 ခုနှစ်တွင်ရှိပြီးသား, Olivier Sinson OpenClassRoom နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လေ့ကျင့်ရေးကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ Udemy ၏ဤပြိုင်ဘက်ကိုသင်မသိလျှင်၎င်းသည်ပြင်သစ်ရှိ FLOATs ၏စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ထက်မပိုပါ။ Udemy တွင်တစ်နှစ်တာအတွင်းအကွာအဝေးသင်ယူမှုသင်တန်းများများပြားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့်အိုင်တီ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းများအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Mathieu Nebra ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုအရိပ်ရစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအွန်လိုင်းသင်တန်းတွေအားလုံးဟာပြင်သစ်လိုလုံးဝကမ်းလှမ်းတာပါ။
ငါ 2018 အတွက် Olivier Sinson Francophone သင်ခန်းများ၏ကက်တလောက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာအတွက်အဓိကဦးစားပေးချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်အလောင်းအစား။ သင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖွငျ့ဤခက်ခဲ task ထဲမှာသူ့ကိုကူညီပေးနိုင်သည်ကြောင်း, သို့သော်သတိရပါ။
စျေးပေါအားလုံး Matters တွင်သင်တန်း! မေလ 14th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောVideo2Brain နှင့်အတူအလွယ်တကူသည်သူ၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Video2Brain နှင့်အတူအလွယ်တကူသည်သူ၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်းပလက်ဖောင်း iBellule ၏တင်ဆက်မှု